Ndị edemede Martech | Martech Zone
Ndị dere Martech zone bụ nchịkọta azụmahịa, ahịa, ahịa na ndị ọkachamara na teknụzụ ndị na-enyekọta aka n'ọtụtụ mpaghara, gụnyere ire ahịa ahịa, mmekọrịta ọha na eze, ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ire ahịa, ịchụ ahịa injinia, azụmaahịa ekwentị, ịntanetị, ecommerce , nyocha, ojiji, na teknụzụ ahịa.
Ndị a bụ ndị ode akwụkwọ kachasị ọhụrụ:
Ihe kacha ọhụrụ Egwu… Nkezi Halloween onye ofufe na -eme atụmatụ imefu ihe karịrị $ 100 n'afọ a!
Ihe kacha ọhụrụ Mgbasa #GetVaccinated na -enweta nkwanye ugwu ndị isi
Ihe kacha ọhụrụ Nlaghachi na itinye ego (ROI) nke Platform Platform Automation
Ihe kacha ọhụrụ Kedụ ka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi ga -esi nyere anyị aka ịkwadebe maka ọdịnihu enweghị kuki?
Jui Bhatia bụ onye nyocha ngwanrọ na N'ụzọ dị mfe, India. N'inwe ahụmịhe na ngalaba teknụzụ na-akwalite, ọ matara ihe ọmụma banyere How (s) na ihe (s) a ga-eme maka azụmaahịa. Ọzọkwa, ọ na-achọsi ike ịkekọrịta ihe ọmụma ya na isiokwu ole na ole metụtara teknụzụ na ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike inyere ụdị azụmahịa ọ bụla aka.
Ihe kacha ọhụrụ Omume 8 na Teknụzụ Ngwaahịa Ngwaahịa
Ihe kacha ọhụrụ Igodo 3 iji wulite mmemme ịre ahịa nkata na -aga nke ọma
Ihe kacha ọhụrụ Kedu ka mmemme iguzosi ike n'ihe na -aga nke ọma si eme ka nghọta na akụnụba akparamagwa pụta
Arun bụ onye ọchụnta ego teknụzụ nke nọ na -ewu, na -atụ ma na -ere weebụsaịtị ndị ahịa na webụsaịtị afọ. N'ime oge ọrụ ya, o nyeere ụlọ ọrụ buru ibu na obere aka ịbawanye ego na itinye ndị ahịa aka dịka onye njikwa, onye ndụmọdụ na onye ndụmọdụ.
Ihe kacha ọhụrụ Otu esi eji nyocha njem ndị ahịa iji bulie mbọ ahịa ị na -achọ
Ihe kacha ọhụrụ Imewe bụ onye nnọchi anya juu nke ika gị
Ihe kacha ọhụrụ Ọmụmaatụ 3 dị ike nke otu esi eji teknụzụ mkpanaka ekwentị mkpanaaka iji kwalite ahịa azụmaahịa
Ihe kacha ọhụrụ Ndebanye aha akwụkwọ akụkọ na profaịlụ Twitter bụ mmeri maka ndị na-ere ahịa email na ndị debanyere aha
Ihe kacha ọhụrụ Chebe akara gị na aha ọma gị na azụmaahịa email ya na asambodo akara akara (VMCs).
Ihe kacha ọhụrụ Companieslọ ọrụ SaaS Excel na Ọganiihu Ndị Ahịa. Ị nwekwara ike… na nke a bụ otu
Ihe kacha ọhụrụ Ụzọ 5 nke ịge ndị na -elekọta mmadụ na -ewulite mmụba ika ị chọrọ n'ezie
Tupu isonye Mita Cro. Ryan na -ewetara anya usoro dị omimi, nghọta miri emi banyere akparamaagwa ndị ọrụ, yana imepụta ihe na -anụ ọkụ n'obi maka nkwalite maka ndị otu Cro Metrics.
Ihe kacha ọhụrụ Igwe ojii nwere ọgụgụ isi kacha mma: Otu esi eji injin stats gaa nyocha A/B mara nke ọma, yana ngwa ngwa
Lina bu onye isi ahia na EPOM. Ọ nwekwara ahụmịhe kpụ ọkụ n'ọnụ na -eduga nkwukọrịta n'ofe ọtụtụ nyiwe, site na mgbasa ozi ọdịnala ruo ndị na -emetụta ya. Na EPOM, ọ na -emepụta mmata ndị ahịa ma na -akwalite mmasị ndị ahịa maka ika site na ọwa ahịa dijitalụ niile kwa ụbọchị.
Ihe kacha ọhụrụ Ihe ịrịba ama 7 ị chọghị sava mgbasa ozi
Ihe kacha ọhụrụ Amamịghe echiche (AI) na mgbanwe mgbanwe ahịa dijitalụ
Ihe kacha ọhụrụ Kedu ihe kpatara njikọ mmetụta uche ga -eji bụrụ ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa oge ezumike a
Ihe kacha ọhụrụ Flip Digital Remedy na-eme ịzụrụ, ijikwa, mee ka ọ dị mma, na ịlele mgbasa ozi n'elu (OTT) dị mfe.